အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာ၏စစ်တမ်း raw ပစ္စည်းများ
o ၏အဓိကရည်မှန်းချက်rganic ဓာတ်မြေသြဇာအစီအစဉ်t သည်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများနှင့်နိုက်ထရိုဂျင်၊ ဖော့စဖရပ်နှင့်ပိုတက်စီယမ်များပါ ၀ င်သည့်အမျိုးမျိုးသောအော်ဂဲနစ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံမစတင်မီသင်သည်ဒေသခံအော်ဂဲနစ်ကုန်ကြမ်းစျေးကွက်အားစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ စက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစစ်တမ်းကောက်ယူရန်ဥပမာ - ကုန်ကြမ်းအမျိုးအစား၊ ဝယ်ယူမှုနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းနှင့်ပို့ဆောင်စရိတ်။
ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောအော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုကိုရရှိရန်မှာအော်ဂဲနစ်ကုန်ကြမ်းများအမြဲတမ်းထောက်ပံ့ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသောပမာဏနှင့်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင်အခက်အခဲရှိခြင်းကြောင့်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံကို ၀ က်ခြံကြီးများ၊ ကြက်ခြံကဲ့သို့စသည်တို့ဖြင့်လုံလောက်သောနေရာများတွင်တည်ထောင်ရန်ပိုကောင်းခဲ့သည်။
In အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှု ထုတ်လုပ်သူများသောအားဖြင့်အများအားဖြင့်အပေါများဆုံးအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကိုအဓိကကုန်ကြမ်းအဖြစ်ရွေးချယ်ပြီး၊ အခြားအော်ဂဲနစ်ကုန်ကြမ်းများသို့မဟုတ်အလယ်အလတ် NPK ဒြပ်စင်များကိုထပ်တိုးများအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ နှစ်စဉ်စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအများအပြား။ ထုတ်လုပ်မှုသည်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုအဓိကကုန်ကြမ်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်တိရစ္ဆာန်ချေး၊
အတိုချုပ်အားဖြင့်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုကြီးထွားစေရန်အတွက်လိုအပ်သောအော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများနှင့်အာဟာရများပါ ၀ င်သည့်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကိုအော်ဂဲနစ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကိုအမျိုးမျိုးသောကုန်ကြမ်းများနှင့်အညီဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။
၁။ အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံသည်လယ်ယာနှင့်အလွန်ဝေးကွာသောနေရာမဟုတ်ပါ။ ကြက်မြေ ure ဇာနှင့်ဝက် man large ကိုကြီးမားသောပမာဏ၊ မြင့်မားသောရေပါဝင်မှုနှင့်အဆင်မပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်လယ်ယာနှင့်ဝေးလွန်းပါကကုန်ကြမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များမြင့်တက်လာလိမ့်မည်။
2. လယ်ယာကနေတည်နေရာအလွန်နီးကပ်လို့မရပါနှင့်လယ်ယာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အထက်ပျံ့၏ညှနျကွားမှာမသင့်လျော်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကူးစက်ရောဂါတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်၊ ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုတားဆီးရေးကိုတောင်စိုက်ပျိုးဖို့ခက်ခဲစေတယ်။
၃။ ၎င်းသည်လူနေorရိယာသို့မဟုတ်အလုပ်areaရိယာနှင့်ဝေးဝေးနေသင့်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်သို့မဟုတ်အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာထုတ်လုပ်မှုတွင်၎င်းသည် malodorous ဓာတ်ငွေ့များထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်လူနေမှုဘ ၀ ကိုထိခိုက်ခြင်းမှဝေးဝေးရှောင်ခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။
၄။ ၎င်းကိုမြေပြန့်ဒေသ၊ ခက်ခဲသောဘူမိဗေဒ၊ ရေနည်းသောနေရာနှင့်လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်သောနေရာများတွင်ထားသင့်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်လျှောကျခြင်း၊ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းသို့မဟုတ်ပြိုကျခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်နေရာများကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။
၅ ။ ပျင်းရိသောမြေများနှင့်မြေများကိုအပြည့်အဝ အသုံးချ၍ လယ်ယာမြေများကိုသိမ်းပိုက်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်။ မူလအသုံးမပြုတဲ့နေရာကိုအတတ်နိုင်ဆုံးသုံးပါ၊ ပြီးတော့သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
6. အော်ဂဲနစ်ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံပိုကောင်းစတုဂံဖြစ်ပါတယ်။ စက်ရုံareaရိယာသည် ၁၀၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀ ㎡ခန့်ဖြစ်သင့်သည်။
၇။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုစနစ်တွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုလျှော့ချရန်နေရာသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းများနှင့်အလွန်ဝေးကွာသောနေရာမဟုတ်ပါ။ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်နေထိုင်မှုရေလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်၎င်းသည်ရေပေးဝေမှုအနီးတွင်ရှိသင့်သည်။